Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Maty ratsy ny lalao' Manome antsika topy maso amin'ny lalao Groovy vitsivitsy amin'ny tranofiara vaovao
Ratsy maty ny lalao Avy amin'ny Saber Interactive sy ny Boss Team Games dia hivoaka amin'ny faran'ity taona ity ary tsy afaka nientanentana bebe kokoa izahay. Ny fijerinay ny lalao tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia endrika mahatalanjona nampahafantatra ny mpandray anjara isaky ny faritra Evil Dead canon. Ity tranofiara gameplay ity dia miakatra avo roa heny amin'izany. Ity lalao notantarain'i Bruce Campbell ity dia mahita an'i Ash Williams sy ny namany manao sarin'ny maty ary mahafinaritra ny valiny.
Toy izao ny famintinana ny lalao:
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny horohoro, vazivazy ary fihetsiky ny “ratsy Izao tontolo izao maty, ratsy Maty: Ny lalao dia mitondra ny tarehin-tsoratra lehibe indrindra avy amin'ny franchise miaraka amin'ny traikefa be loatra sy feno hafaliana manohitra ny herin'ny maizina. Miaraha miasa amin'ny ekipa sisa velona efatra, anisan'izany i Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur ary maro hafa, hiady amin'ny Deadites ary handroaka ny Demonia Kandarian ratsy toetra. Na lasa Demony mahery amin'ny tenanao, amin'ny fampiasana ny fahefanao hifehezana ny maty ho faty ary hitelina ny fanahin'izy ireo!
Mitovy be izany Zoma faha-13 Ny lalao. Mametraka mpilalao mivantana manohitra mpilalao mivantana izy io. Tsara Vs. Ratsy. Mitovy amin'ny Zoma faha-13 Ny lalao ity iray ity koa dia toa mijery tsara ny tsipiriany tsirairay. Hamarino tsara fa mijanona manodidina ny faran'ny tranofiara ihany koa. Hodinihintsika ny olon-dratsy fanta-daza amin'ny Army of Darkness. Fanampiny tena goavambe amin'ny lalao.
Ratsy maty ny lalao mivoaka amin'ny PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, Xbox One, ary Nintendo Switch amin'ny faran'ity taona ity.
Inona no hevitrareo lehilahy momba ilay tranofiara gameplay Ratsy maty ny lalao? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Neil Gaiman dia manome fitsidihana ny andiany amin'ny adaptation The Sandman ho avy ao amin'ny Netflix. Jereo eto.
Army ny haizinalavenona williamsBruce CampbellEvil DeadRatsy maty ny lalao